Mareykanka oo War kasoo saaray duqeyn uu ka fuliyay Jamaame - Awdinle Online
Iyadoo lala kaashanayo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, ciidamada Taliska Mareykanka ee Afrika waxay labo weerar ka fuliyeen agagaaraha Jamaame iyo Deb Scinnele, Soomaaliya, Janaayo 19, Sida uu sheegay taliska.
Qiimeyntii ugu horreysay waxay muujineysaa in duqeymaha lagu dilay saddex sarkaal oo ka tirsan al-Shabaab sida lagu sheegay war kasoo baxay Mareykanka.
Qiimeynta hore ee taliska ayaa ah in qof rayid ah uusan ku dhaawacmin ama ku dhiman hawlgalkan.
“Duqeymahan waxaa lagu bartilmaameedsaday hoggaamiyeyaal caan ah oo ka tirsan al-Shabaab oo ku lug lahaa fududeynta IED, tababar dagaal, iyo qorsheynta weerarrada,” ayuu yiri Taliyaha Ciidamada Cirka ee Mareykanka Maj. Gen.
Waxaa uu intaas kusii daray “Ku dhufashada hoggaamiyayaashani waxay carqaladeyneysaa awoodda al-Shabaab ee ah inay weeraraan asxaabteena oo ay si aan kala sooc lahayn ugu laayaan dad rayid ah oo aan waxba galabsan qaraxyo macmal ah. Waxaan si dhow ula shaqeyneynaa saaxiibadeena Soomaaliyeed si aan u taageerno howlgalladooda ka dhanka ah Al-Shabaab, ilaalinta dadkooda, iyo maamul u sameynta. ”
Previous articleKulan u socdo Taliyaha NISA & Madaxweynaha Hirshabeelle
Next articleSarkaalkii Amray in Ciidanka jooga Ereteriya in ay ka qeyb galaan dagaalka TPLF oo la ogaaday